Shiinaha PDQ Muuqaal Half sariirta la sudhay oo loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaabada Walmart Stores | Raymin
PDQ Muuqaal Half sariirta lagu dhejiyay oo loogu talagalay Bakhaarka Walmart
Lambarka Moodalka: GFPD20200705
Cabir: W48 '' x D20 '' x H48 ''
wax Foornada B adag + 350gsm CCNB
Daabacaadda: Daabacaadda CMYK
Dhamaadka kama dambeysta: Varnish dhalaalaya
Siyaada ah: Midna
Goobta Asalka: CN
Magaca Brand: Muuqaalka Raymin
Shahaadada: SGS, ISO, BSCI
Tirada Ugu Yar: 100pcs
Qiimo: Naga hubi
Faahfaahinta Baakadaha: Golaha buuxiyay alaab gudaha
Waqtiga dirida: 15 maalmood oo ah ≤5,000pcs
Waqtiga tusaalaha ah 3 maalmood
Sample Charge 150 $, dib loo soo celin karo kadib amarka la xaqiijiyay
Shuruudaha Bixinta: L / C
Kartida Bixinta: 100,000 kumbuyuutar asbuucii
Naqshadeynta qaabdhismeedka Naqshadda nashaadaadka nalka
Farshaxan / garaaf Loo habeeyay
Qaabka farshaxanka PDF, AI, PSD, PS
Hal dariiqo oo lagu soo jiito dareenka macaamiisha ayaa ah daabacaad tayo leh oo ku jirta shaashadahaaga. Tan waxaa lagu sameyn karaa adigoo soo bandhigaya astaanta shirkaddaada, soo bandhigaya calaamadeyntaada ama muujinta sheyga qaab muuqaal ahaan raalli ka ah. Haddii aad doorato bandhig dabaq ah, calaamado tafaariiqda sudhan ama heysato buug yare, tusmooyinka kartoonada daabacan ee caadadu waxay u horseedi kartaa iib sare. Bandhigyada Goobta Iibsiga (POP) ayaa lagu yaqaan inay bixiyaan dib-u-soo-celin sare maalgashiga. Dhigista alaabooyin si qurux badan loo qaabeeyey oo midabbo leh hareeraha dukaankaaga iyo ka-bixitaanka ayaa kaa caawinaysa in indhaha macaamiishaadu ay u soo jiitaan alaabada aad soo bandhigtay. Waxaan bixinaa noocyo badan oo daabacaad ah si aan ula kulanno baahida macaamiisheena. Iyada oo leh awoodayada daabacaadda ee kala duwan, waxaad ku dooran kartaa qaabkee ku habboon kan ku habboon baahiyahaaga iyo miisaaniyadda. Nooc kasta oo aad dooratid, waxaad kafilankartaa waxa ugufiican qalabkeena casriga ah iyo xirfadleyaasha maareynta midabka shahaado ku leh goobta.
Awoodaheena waxaa kamid ah:
1) Daabacaadda Xayeysiinta: Si loo gaaro daabacaad tayo-tayo leh, waxaan ku daabici doonnaa sawiradaada xallinta sare warqad, ka dibna waxaa lagu dhejinayaa guddiga jiingado. Nidaamkan waxaa loo isticmaalaa in lagu daboolo baahiyahaaga daabacan ee tayada sare leh.
2) Flexography: Qaab-dhismeedka miisaaniyad-saaxiibtinimada leh wuxuu ku lug leeyahay daabacaadda astaantaada ama farshaxankaaga si toos ah guddiga saboolka ah. Tani badanaa waxay ku lug leedahay inta u dhexeysa hal ilaa saddex midab. Qaabkan miisaaniyad-saaxiibtinimada leh waxaa ka mid ah daabacaadda astaantaada ama farshaxankaaga si toos ah guddi jiingado ah. Tani badanaa waxay ku lug leedahay inta u dhexeysa hal ilaa saddex midab.
3) Dijital: Inta lagu guda jiro howshan, waxaan si toos ah ugu codsaneynaa daabacaad midab-buuxa ah guddiga jiingado si loo helo xal kharash-ku-ool ah. Tani waxay ku habboon tahay shaybaar xilliyeed ama muddo-gaaban ah. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ka go'aan gaarista nooca kartoonada daabacan ee sida ugu fiican ugu shaqeyn doona mashruucaaga, fadlan na soo wac. Waxaan ku farxi doonnaa inaan ka wada hadalno xulashooyinkaaga oo aan bixinno talobixin khibrad leh.
4) Muuqaalka Raymin wuxuu ku sameeyaa dhammaan nashqadeynta iyo daabacaadda guriga gudihiisa. Waxaan si buuxda gacanta ugu haynaa tayada iyo xawaaraha mashruuc kasta sidaa darteed waxaad had iyo jeer si sax ah u ogaataa goorta aad heli doonto amarkaaga. Iyada oo saxan-dejiyeheenna goobta, waxaan ku bixinnaa caddeynno midab ah gudaha 36 saacadood. Waxaan haysannaa in kabadan 99% waqtigii loogu talagalay sababo la xiriira howlaheena guriga oo gebi ahaanba ah. Muuqaalka Raymin wuxuu bixiyaa faa iidooyin badan oo naga duwanaan kara tartanka.
Sida shirkad la aqoonsan yahay oo ah ISO 9001 / FSC / BSCI, alaabtayada waxaa loo qabtaa heerar warshadeed oo aad u sarreeya. Tallaabo kasta oo ka mid ah naqshadeyntayada, wax-soo-saarkeenna iyo daabacaaddeenna waxaa maraya xakameyn tayo leh oo adag si loo hubiyo in natiijada ugu dambeysa ay ka badnaan doonto rajooyinkaaga Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku faanaa habkayaga cagaaran, annagoo adeegsanayna qalab laga sameeyay 100% wax dib loo cusboonaysiin karo. Shaashadda kartoonnada daabacan ee daabacan waxay siisaa awood aan xadidnayn si kor loogu qaado ka-qaybgalka macaamiisha. Iyada oo leh sawirro midab leh, oo tayo leh, bandhigyadaadu waxay kobcin karaan ganacsigaaga waxayna kordhin karaan wacyiga sumadda. Waxay sidoo kale bixiyaan muuqaal soo jiidasho leh iyo is-dhexgal si loo kordhiyo ka-qaybgalka dukaanka. Dalbo Bandhigyada Kartoonadaada Daabacan Maanta. Ku suuqgee badeecadaada adigoo wata shaashad daabacan oo daabacan oo laga soo qaado Hal-abuurka Soo Bandhiga Hada. Iyada oo leh noocyo kala duwan iyo xulashooyin daabacan, waxaan ku helnay taam ku habboon ganacsi kasta. Kubilow adoo codsanaya qiyaas maanta! Ma haysaa waxoogaa su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada? Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto.
Hore: Xarunta Hadiyadaha Hadiyadaha Qashin qubka ayaa soo bandhigaya isku darka alaabada Xisbiga
Xiga: Smart 3 tiir sanduuqa baakadaha PDQ ee silsiladaha Muhiimka ah, bandhig miiska iibka kulul
Smart 3 sanduuqa baakadaha PDQ ee silsiladaha Muhiimka ah, ...
Flat buuxiyeen Costco Display Pallet Full for Frui ...
Xarunta Hadiyadaha Hadiyadaha Qashinka qashinka lagu soo bandhigo xafladaha Xisbiga ...
Nadiifiyaha Nadiifinta guriga ee qaabka POP soo bandhigida ...
Afar Shaashadood oo Muujinaya Dabaqyada, Fudud ...